Qabiyyeewwan galmee kamtu akka maxxansaman ifteessa.
Saxaatoo fi waantota
Barruu akka dhokataatti mallattaa'e maxxansuuf dirqaala kana dandeessisi . Barruun armaan gadii maxxansameera: barruun akka dhokataatti Format - Character - Font Effects - Hidden dhaan tottolchamee, fi badheelee barruu Barruu dhokataa fi Keeyyata dhokataa.
Iddooqota barruu maxxansuuf dirqaala kana dandeessisi. Maxxansa keessatti iddooqota barruu duwwaa dhiisuuf dirqaala kana dadhabsiisi.Iddooqota Barruu badheelee dha.
Barreessaa galmeelee LibreOffice kan fuula baay'ee qabaniif tartiiba maxxansaa qindeessa.
Fuulota bitaa(galmee HTML tiif miti)
Fuulota mirgaa (galmee HTML tiif miti)
If you print a document in portrait on a landscape page, two opposing sides in a brochure will be printed next to each other. If you have a printer with double-sided printing capability, you can create an entire brochure from your document without having to collate the pages later. If you have a printer that only has single-sided printing capability, you can achieve this effect by first printing the front pages with the Right pages option marked, then re-inserting the entire paper stack in your printer and printing all the back pages with the Left pages option marked.
Mirgaa gara bitaatti
Fuulata duwwaa ufmaan saagaman maxxansi
Yoo dirqaalli kun dandeessifame, fuulonni duwwaan ufmaan galan maxxanaa jiru. Yoo maxxansi gar lamee ta'e kun baayisee gaarii dha. Fakkeenyaaf, kitaaba keessatti, haalatni keeyyataa "boqonnaa" akka fuula qaraan jalqabutti qindaa'eera. Yoo boqonnaan duraa lakkoofsa qaraa irratti dhume, LibreOffice fuula duwwaa lakkoofsa guutuu saaga.Dirqaalli kun akka fuula lakkoofsa guutuu sana maxxansitu yookiin dhiistu to'ata.
Baattuu waraqaa qindaa'inoota maxxansaa irraa
Yoo sooftweerii faaksii kompiwutara kee irratti ijaartee kallattiin galmee barruu irraa faaksii gochuu barbaadde, maashinee faaksii barbaadde filadhu.